Etu esi etinye Ubuntu 13.10 Saucy Salamander site na ntinye | Site na Linux
Ọ bụrụ na ị bụ onye bịara ọhụrụ na Linux, ha nwere ike ịgwa gị ka ị nwalee Ubuntu: nkesa dị mfe ma dịkwa mfe iji, na mgbakwunye, nwere ihu enyi enyi (ọ bụ ezie na ọ dị iche na ihe ị na-emebu na Windows) na nke amuru na ebumnuche imepụta "Linux maka mmadu" na nkeji ohuru a anyi na akowa otu esi etinye ya Ubuntu 13.10 Saucy Salamander nzọụkwụ site nzọụkwụ ... ee, ka dummies.
Tupu ịwụnye Ubuntu 13.10 ị ga-arụ usoro 3:
download ihe oyiyi Ubuntu ISO. Ọ bụrụ na ịmaghị ụdị nke ibudata, ana m akwado ka ị gụọ nke a mmeghe iji nweta ụfọdụ echiche ndị bụ isi ga-enyere gị aka mgbe ị na-ahọrọ nkesa ọ bụla.
Ozugbo akpụkpọ ụkwụ Ubuntu, pịa akara ngosi Wụnye Ubuntu 13.10. Ọkachamara nwụnye ga-apụta.
N'ikpeazụ, ihuenyo iji mepụta akaụntụ na Ubuntu One, ọrụ nchekwa igwe ojii nke Canonical, ga-apụta. Ọ bụrụ na ịchọghị ịnweta akaụntụ Ubuntu Otu ma ọ bụ chọọ ịkwụsị mkpebi ahụ, pịa bọtịnụ ahụ Banye mgbe e mesịrị.
Ozugbo i buliri sistemụ ahụ, ana m akwado ka ị lelee onye ndu anyị Ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye Ubuntu 13.10 iji kwadebe ya.
Ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye Ubuntu 13.10
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Etu ịwụnye Ubuntu 13.10 Saucy Salamander site na nzọụkwụ
Dị ezigbo mma, mana peeji nke distros bụ ebe a. Nke ochie anaghịzi emegharịgharị.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka nchọpụta gị. Amataghị m ya. Emeela m mgbanwe ndị dị mkpa. Ugbu a njikọ ndị ahụ na-arụ ọrụ nke ọma. 🙂
"Ubuntu 12.10" abanyela n'ime gị n'ọtụtụ ebe.
Ihe kacha sie ike iji wụnye ubuntu maka onye ọhụụ bụ nkewa.
Daalụ! Edegharịrị m ya. 🙂
ajụjụ ma ọ bụrụ na achọghị m iji swap ebe pc m nwere 8gigs nke ebulu ebule nke a ga-emetụta usoro
Azịza dị mkpirikpi:
Zaghachi ndị ọrụ
Azịza ya bụ mba .. ọ bụrụhaala na ị gaghị eji ihe karịrị 8 GB nke ebe nchekwa… mba?
Ọ bụrụ na ị ga-edozi vidiyo ma ọ bụ kpọọ egwuregwu vidio, wdg…. hmm .. a maghị m na ọ bụ ezigbo echiche ịghara iji swap.
Nke a abụghị eziokwu, dezie vidio bụ ihe ndị bara uru otu, mgbe ị riri SWAP ọ gaghị ekwe omume idezi vidiyo, n'ihi otu o si adị nwayọ.
Maka egwuregwu ahụ ọ bụ ihe nzuzu, ndị kachasị sie ike nwere ihe kachasị mkpa nke 2 GB nke RAM na 4 ma ọ bụ ruo 8 maka sistemụ 64-bit (Icheta nke ejikọtara yana sistemụ arụmọrụ yana mmemme na-agba n'azụ), mana n'eziokwu Egwuregwu ndị ahụ Ha anaghị agabiga na-eri 2 GB ma enwere m obi abụọ na enwere otu nke ruru nke ahụ na sistemụ GNU / Linux
Ọ bụrụ na ọ nwere ike imetụta gị, a na-ejikwa swap na usoro nke ịbanye pc, a na-atụ aro na, ọ bụrụ na ị ga-eji arụmọrụ a, ị ga-eji opekata mpe otu swap dị ka ebule.
Site na ebule ahụ, ọ bụ ihe na-echekarị na ị gaghị ezu ya, mana karịa ebule anyị nwere, ihe ndị ọzọ anyị chọrọ ime, ma ọ bụrụ na ọ jupụtara, ma ọ bụrụ na enweghị mgbanwe, mgbe ahụ usoro ahụ na-agbaji ala, ọ baghị uru idobere obere oghere na HDd maka ịgbanwee.
Nke ahụ ziri ezi ... enyi Cesar ziri ezi ...
O yiri ka a ga-enweta ozi ahụ na nzukọ ọ bụla laa azụ na 2004 mgbe kọmputa 2GB bụ ihe ọhụrụ.
Ọ dịghị ebe iji arụmụka siri ike na arụmụka arụ ọrụ karịrị 2 GB nke SWAP kwadoro, yana mgbe 4 GB gasịrị ọ ga-ekwe omume iwepu ya.
Site na KDE na-arụ ọrụ igwe arụmọrụ 2, firefox nwere ihe dị ka taabụ 10, egwuregwu amarok na vlc nwere vidiyo 720p anaghị erute 5 GB. Enwere ohere zuru ezu iji tinye akụrụngwa ụra.
Ọ bụ otu ihe ịbanye hibernate na ihe ọzọ ịkwụsịtụ. Nke mbụ, ncheta RAM na-agbanwe agbanwe, nke okwu dị mfe pụtara na ha chọrọ ike iji debe data n'ime ha, n'aka nke ọzọ HDD bụ ụdị ncheta na-enweghị isi, yabụ mgbe agbanyụrụ ha, ha na-edebe data gị.
Usoro nkwụsịtụ na-akwụsị ngwa gị niile, belụsọ RAM na-echeta. Usoro ezumike ahụ na-emechi PC gị niile, gụnyere RAM, ma buru ụzọ kwado ya na HDD. Mgbe agbanyere akụrụngwa ahụ, a na-eweghachite nkwado a n'ime RAM.
Ugbu a, amaghị m ebe HDD a na-echekwa ndabere, ọ bụrụ na ọ bụ na swap na-akọwa ihe kpatara na enweghị m ike ịme ya na ite m.
Este Ọ bụ otu n'ime ebe m chọtara isiokwu a kọwara nke ọma (na ọ bụghị nzukọ sitere na 2004 ...)
Echere swap ahụ n'oge ebule dị ụkọ ma dịkwa oke ọnụ. Taa eji ya eme ihe bara uru na sava ma obu oru di oke nma. Ọ bụrụ na ị jiri gentoo na obere kọmpụta, ị ga-ejikarị ya maka ikpokọta yana dị ka oghere. Na kọmputa ma ọ bụ sava ọgbara ọhụrụ naanị ọnọdụ ebe m hụrụ na m malitere ide ebe ahụ bụ ọdụ data, ma ọ bụ iji VMware (nke na-adọ aka na ntị mgbe niile). Ọ ka mma ịhapụ ọtụtụ gigs gbanwee ka sava ahụ buru ibu na-agba obere nwayọ, tupu ya agbada kpamkpam, nke bụ ihe na-eme ma ọ bụrụ na enweghị ebulu ọzọ.
Enwere m olile anya na anaghị m ada ụda, mana aghọtaghị m ebumnuche nke isiokwu ahụ, ebe enwere ọtụtụ puku ntuziaka ebe niile (ọbụlagodi ebe a), na karịa karịa mgbe usoro nwụnye ahụ bụ otu ihe site na ụfọdụ nsụgharị azụ. ..
Ebumnuche nke isiokwu bụ ka ndị mmadụ gaa Google "otu esi etinye Ubuntu 13.10 Saucy Salamander."
Daalụ maka azịza ya, Ọ bụrụ na ọ bụghị nke ukwuu ịjụ, ọ ga-adị mma ime post banyere ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye kubutu 13.10, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ post banyere nke a na google ...
dịkwa mma. Aga m eche banyere ya! 🙂
Chọghị post maka nke ahụ, ị ​​wụnye kubutu machibidoro mgbakwunye, ma ugbu a: ..: / ma ọ bụrụ na ịchọrọ vlc, ịkwesighi ịme ihe ọ bụla.
Ubuntu nwere ike ịbụ OS na spyware na ihe ndị yiri ya, mana Ubuntu dị ntakịrị ihe mgbe emesịrị.
Agbalịrị m Debian na Acer Aspire One yabụ ka ọ ghara ichegharị m ọzọ:
Ọ bụ ọgbaghara kachasị iji mee ka ọ rụọ ọrụ, ọ na-enye m ọtụtụ njehie, ọ bụ ya mere m ji eji Elementary OS n'ihi na desktọpụ desktọọpụ m mebiri emebi 🙁 na m ga-eji netbook a M **** na Ubuntu dabere distro.
Fedora, naanị otu na-arụ ọrụ ihe niile mana ọ na - egbochi ya na netbook m.
Ekele na ekele maka post Pablo!
* Ghọta ghara icheghachi
Njehie akwụkwọ ọkọwa okwu m maka firefox xD
Ana m asị gị nnọọ! Daalụ x ikwu!
M na-emekará »‹ 4 disk nkebi. / mgbọrọgwụ. / ụlọ. gbanweta. na / buut na ikpeazụ m na-ahụ na ọ bụghị nnọọ nkịtị na ndị ọzọ na distros.
a naghị atụkarị aro ya, ọ bụ ezie na a kpọtụrụ ya na akwụkwọ ntuziaka gentoo
Na Arch, echere m na ha kwadoro ya, ma ọ bụrụ na ncheta m na-enyere m aka.
Ọ dị m ka a na-eme nkuzi ahụ na igwe arụmọrụ Windows 8. Ọ bụrụ na ọ bụ na kọmputa ọhụrụ nwere Windows arụnyere na mbụ, ọ ga-abụ otu ma ọ bụ na ọ ga-adị mkpa iji gbanwee ihe dị na mbụ BIOS / UEFI?
Daalụ n'ọdịnihu, ekele
Zaghachi JCSenar - linuxirun.com
Ndewo, diri onye obula. Enwere m obi abụọ metụtara ihe m chọrọ ibubata OS m na 64 ibe.
M nwere a 3gb ebule laptọọpụ na na mbụ m chọrọ ịkwaga 64 ibe n'ibe (ma ọ bụrụ na ha anaghị nye ndụmọdụ m n'ezie) ma… Enwere m ọtụtụ faịlụ na mmemme. Ihe kachasị amasị m idebe bụ igwe arụmọrụ m gbasara 7, mana n'ezie ha dị na 32 bits. Ajuju m di na mbu ...
Ngwa igwe vbox ọ ga-arụ ọrụ m ọbụlagodi mgbe m dị afọ 32? Na nke abụọ bụ: ọ ga-adị m mma ibu ya ruo 2? Daalụ n'ọdịnihu are bụ kpakpando n'ezie
Zaghachi onye nwe ala
Banyere ajụjụ gị:
1) Dị ka m maara, ọ gaghị enwe nsogbu ịnwe igwe 64-bit na 32-bit mebere igwe.
2) Ee, na 3 gb nke ebule m kwadoro ka ị gaa 64 ibe n'ibe. Ma ọ bụghị ya, ị gaghị ewere ihe ọ juiceụ juiceụ niile na igwe gị, ọkachasị mgbe ị na-eri ọtụtụ ihe onwunwe.
Ana m ekele gị nke ukwuu Pablo!
N’ezie ọ bụ nnukwu ihe ọ toụ ịgụ gị, ma gị ma onye ọ bụla nke na-ede akwụkwọ a magburu onwe ya. Ekele gị eta ondo ibili! 🙂
Kama nke ahụ, Lander. Nnukwu aka! Paul.
Otu ajụjụ ... Site n'inye ya n'ime ndị ọzọ nhọrọ, Enwere nhọrọ iji wụnye Ubuntu na ọnọdụ ederede? Ebe ọ bụ naanị ya bụ usoro rụọ ọrụ maka m ịwụnye Ubuntu na-enweghị ịrịọ maka ịntanetị (na okwu ndị ọzọ, ntinye Off-akara).
Internetntanetị ọ na-ajụ gị? eh, kedu iju, naanị m kwụpụ Ethernet ma ghara ijikọ wifi ma wụnye na-enweghị ịntanetị
Na-akpali ma m na Debian 🙂
Onwere onye mara mgbe Mint-KDE Petra ga - apụ?
Ihe na - eme bụ na enwere m mmasị na desktọọpụ KDE na nchịkọta .deb ma ọ dakwasịla m n'ọtụtụ igwe na mgbe m chọrọ ịwụnye Kubuntu 13.10 nke 32 ma ọ bụ 64 ihuenyo mgbe ksplash nọgidere na-adị oji ... enweghị ụzọ gaa ebe ahụ, ọbụnadị na buut na nomodeset.
Agbalịrị m Kubuntu 13.04 na enweghị nsogbu, otu ihe ahụ Netrunner 13.06 ha wụnye ma gbaa ọsọ; m wee lelee ya na OpenSUSE, Mageia, Chakra, Kaos ma o nyeghi nsogbu ọ bụla, etinyere ha na eserese mana ọ nweghị ụzọ Kubuntu 13.10 gafere ihuenyo ojii. M nwara a ikpe mbipute nke 14.04 na ike wụnye ma, na ihuenyo bụ nwa ma ọ bụrụ na otú now; ọ dịghị ụzọ a ga-esi gbaa ha ume ka ha jiri ya wee nweta nkesa ndị ọzọ.
Ahapula m nleba anya na ogbako Kubuntu na m na-akowa ya dika nnochi ma ha enyeghi m azịza.
Kedụ ka m ga - esi wụnye na enwetaghị ihuenyo ojii ahụ?
Ogbogbo 72 dijo
Enyi mgbe m na-etinye Ubuntu, mgbe m bidogharia Kọmputa m nwetara njehie 14, m meghere ya.
Naanị m chọrọ ịma ihe kpatara ya?
Zaghachi na garcialuis
Ezigbo ihe ọmụma na nkọwa nke usoro site na nkwụsị.
M nwere di na nwunye ajụjụ: Ọ bụrụ na m na-etinye nhọrọ "Wụnye Ubuntu n'akụkụ Windows", ọ bụ na ọ dịghị mkpa nkewa ihe ọ bụla? Ọ dị mfe ịnweta usoro abụọ ahụ?
Ajuju ndi ozo, bu na m nwere ike iwunye Ubuntu a na PC m, n’enweghi nsogbu initramfs, nihi na mbipute 12.04 apughi m iwunye ya, enwere m ike itinye ya na Wubi, mana o na-atu m njehie oge obula. . Ntinye nke 12.04 Ana m eme ya na Pen Drive, ejiri m obere ikike Netbook mee ya ma eme ya n'ụzọ zuru oke, mana na desktọọpụ m enweghị ike. Ya mere achọrọ m ịma ma agbanyeghị na 13.10 njehie initramfs ga-eso
Daalụ nke ukwuu na ekele maka blog.
Banyere ajụjụ nke mbụ gị, ọ dị nfe dịka nke ahụ ... Ubuntu ga-elekọta oke nkewa kwekọrọ.
Banyere nke abụọ, enweghị m ike ịgwa gị ma ọ bụrụ na e meziri njehie na 13.10.
Taa bụ Sọnde, 10:20 n'ụtụtụ. Ebe ọ bụ na ụnyaahụ ụnyaahụ, mgbe m kwenyesiri ike na Windows 7, na-enye nsogbu karịa ngwọta ma nke a mere m n'oge ụbọchị iri na ise gara aga mgbe ịwụnye "ihe niile", Adobe CS6 zuru ezu, ụlọ ọrụ zuru oke 2014, antivirus ọhụrụ (BitDefender) na inwe mebiri diski sistemụ maka otu ụbọchị na ọkara, echere m na nsogbu agafeela. Ma ee e, ha ka malitere.
N’izu ahụ, na-achọ post nke ga-akọwa mgbọrọgwụ nke quilombo m, ahụrụ m ndị mmadụ bụ ndị ọrụ Linux ọtụtụ oge, ọtụtụ n’ime ha nwere UBUNTU na ekpebiri m “iche maka ya ... ezigbo”.
Ọ na-asọ m oyi mgbe niile kwapụ sistemụ m na-amaghị. Na njem ahụ, ị ​​na-efukarị mgbe niile na ihe ị ga-emeri na-emezughị ihe ị tufuru.
Adị m agadi ehi, (65) na m si n'oge kọmputa na-atụle tọn abụọ na ebule 16k. (IBM 30 sistemụ) ọ dịkwa mkpa ịrụ ọrụ n'abalị na ebe mgbakọ ahụ iji hụ na ume na ọnọdụ okpomọkụ dị. Ebe ahụ ka ọ malitere.
Ubuntu, site na m wedata onwe m na nke onwe, muo ebe obula ichoro ile ya anya.
Enwebeghị m ike ịwụnye ya, na-eme usoro a gosipụtara n'ụzọ doro anya na-enweghị nkọwa zuru ezu. Ọ na-emecha sị GRUB -INSTALL dara. Nke a bụ ajọ mmejọ!
Mgbe inwere nhọrọ igbanwe ebe ebe etinyere ya, na agbanyeghi ihe ichoro, obere akara aka ya na akara ocha nke nwere akara ojii n’aghaputa mgbe nile. E nwere ọtụtụ awa na ọtụtụ laps iji wụnye a unyi, nke na nkenke, mgbe ahụ, m na-adịghị ọbụna mara ihe hell ọ bụ maka, ma ọ bụrụ na ọtụtụ n'ime ihe omume m na-eji na-adịghị na-agba ọsọ na Linux na subsides na ha na-enye gị (ma ọ dịkarịa ala na njikwa ihe osise) ha bụ banana.
Ugbu a, m na-agwa gị ihe bụ nsogbu m ugbu a, naanị ka i wee buru ya n’uche, ọ bụrụ na ị ga-eweta azịza ma chọọ inyefe m ya.
Oge ọ bụla m malitere Windows, nhọrọ UBUNTU pụtara ma achọghị m ịgụ aha ahụ ọzọ na ndụ m ma ọ bụ ihe fọdụrụ na ya.
Kedu ka m ga-esi nweta nhọrọ ahụ na Windows boot?
Ọ dị ka ahụhụ na GRUB
Ma eleghị anya, ihe ndị a ga-enyere gị aka:
Agbalịrị m ịwụnye ubuntu13.10 ma enwetara m ihuenyo ojii nke kwuru grub> ọ naghịkwa aga ebe ahụ, enweghị m ike ịnwale ya.
nwalee ubuntu 12.04 lts ọ gbalịrị ya nke ọma.
Gịnị banyere 13.10? gịnị kpatara njehie a na otu esi edozi ya?
Ikekwe post ochie a nwere ike ịba uru:
ngwa Linux dijo
Ndewonu, Anam atu anya na odi nke oma. Ajuju mbu m nwere, I doziri ya? O buru na achoghi m ima onyogho ahu si na ebe ibudatara ya na ihe oku ya ka i jiri lee ya. O buru na i mere ya na a tmbn pendrive with what application ka imere ya? Otu n'ihi na mgbe anyị nwere ngwa etinyere na nbudata ma ọ bụ na ndabara ọ na-emetụta anyị na nbudata ahụ na ezughị ezu. Ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya dee, mgbe ahụ ọ ka njọ; Did jirila onyonyo ahụ na PC ọzọ? Enwere m olileanya na m nwere ike ịnyere aka ntakịrị. Banyere.
Nke mbu, ị maghị ihe ọ bụla gbasara Linux, nke ahụ bụ ihe kpatara ị ji egosipụta onwe gị n'ụzọ ahụ ... otu esi mkpa ka a mụọ ihe niile; Buru ihe edere, omume, ihe ngbanwe nke ikpe na njehie na nke kacha njọ, mana iji ezi nghọta ghọta ihe niile nwere ike. Tinye ụbụrụ gị ka ọ rụọ ọrụ.
N'ezie ... Na 65, dọkịta nwere afọ iri atọ na asaa nke ịwa ahụ siri ike, nwere doctorates abụọ, na nwa okorobịa maara Linux, na-emeso m dị ka onye umengwụ nzuzu, n'ezie karịa iwe, ọ na-adọrọ uche m. N'oge a na ndụ m, (ma ọ bụ na ndị gara aga), ihe ikpeazu ga-eme m bụ ịme usoro Nerd. Ha nwere ọjọọ pịa, nwa. Ọzọkwa. Ọ bụrụ na m chọrọ ngwa ọrụ Linux (nke m na-enyo enyo), m na-aga zụta ya. Okwu Ubuntu bụ ka m kọwara gị ya na ihe ndị butere m ịnwale ịwụnye ya enweghị ihe jikọrọ ya na mkpa "mụọ Linux" na mbụ. N'ezie, Ubuntu, otu n'ime ihe ndị na-emesi ike n'okwu nkesa ya, bụ omume enyi na mgbanwe nke ntinye ya, yana interface ya na ọrụ ya. Site n'ebe ahụ ị bịa gwa m ka "tinye ụbụrụ m n'ọrụ", anyị ga-enyocha ego ole nke gị na-arụ na mpụga nke Linux. Echeghị m na ọbụlagodi ịkwanye ya ga-eme ka ọ kwaga. Nke a bụ ihe gbasara Nerdolandia.
Ekele m si cotolengo.
Adrián: Echefuru m ịkọrọ gị obere ihe ọ bụla, ọ dịghịkwa ihe ọzọ. Sọftụwia ọ bụla, karịa sistemụ arụmọrụ ọzọ, ebe ọ bụ na ọ dị otu a na dịka o doro anya, mgbe ị na-ekwu maka "Mbugharị". Ọ ga-abụ ihe dị mkpa maka ndị kwabatara na Ubuntu, ọ bụghị inwe akwụkwọ, dị ka ị rụtụrụ aka, mana yana ntuziaka e duziri ndị ọrụ nke OS ndị ọzọ, ka ụdị ọnọdụ a ghara ime, nke n'ikpeazụ "ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa" megide Ubuntitis maka ndị ọzọ ụwa. Mgbe m nwesịrị ahụmahụ na-adịghị mma, ahụrụ m (n'otu ụzọ ahụ na mbụ, yana "ubunteros"), na ọtụtụ ndị mmadụ mere otu ihe ahụ dị ka m. Ugbu a, m nwere ugbu a pụọ ​​site "ode akwụkwọ" na njikọ ya, na o doro anya na enwere nsogbu na ndị ọkwọ ụgbọ ala kaadị abụọ (dịka m si kwuo). Nke a ekwesịghị ime, ọ bụrụ na Ubuntu maara nsogbu ahụ, o kwesịrị ikpughe ya iji debe ndị ọrụ ya nwere ike ịbịa site na OS ọzọ ruo oge
You hụrụ Microsoft, ma ọ bụ onye ọrụ Windows ọ bụla, ma ọ bụ DOS kwadoro dị ka ihe ngwọta maka ọtụtụ puku quilombos nke MS na-eweta, na "gaa ịmụ DOS"?, Ma ọ bụ n'ihe banyere PHP, HTML, wdg Ndị na-amụ ihe ndị ahụ, ọ bụ n'ihi na ha bi ma ọ bụ na-arụ ọrụ site na nke ahụ. Ma n'akụkụ nke ọzọ enwere ndị ọrụ, ndị ọrụ dị mfe ndị chọrọ naanị interface n'etiti mmemme na onwe ha. Cheedị na ọ bụrụ na otu ụbọchị ị gaa ụlọọgwụ (Chukwu ekweghị na nke a) ma dọkịnta nọ n'ọrụ gwa gị, na iji nweta ahụ efe, ị ga-aga mahadum ma mee afọ agụmakwụkwọ isii iji dozie ihe mgbu nke akwa aka ekpe na-arịa. gị?
Ga-abụrịrị nwata. Ya mere ndụmọdụ nwoke ochie: Mee ka ị na-eche echiche ma mee ka ị nwekwuo ihe kpatara ya.
Ọ dị ka nke ahụ, bocha. O nwere ike ịbụ Linux ka enwere ike ịbụ "onye ọrụ enyi". Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya n’ezi, n’oge ugbu a, ịkwesighi ịbụ onye nerd iji wụnye ya. Enwere ike ịnwe ikpe akọwapụtara nke ihe na-agbagwoju anya, mana ọ na-abụkarị ihe ọzọ na ọ bụghị iwu. N'otu ụzọ ahụ ọ na-eme na Windows ma ị na-eji ụbọchị niile na-anwa ịwụnye ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ mezie ọdachi ndị nje X kpatara igwe gị, wdg.
N'echiche ahụ, ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na Ubuntu, m na-atụ aro ịnwale nkesa ọzọ. Nke ahụ bụkwa akụkụ nke ịma mma nke Linux. Dịka ọmụmaatụ, enwere m nsogbu na kamera weebụ m na Ubuntu ma ọ gaghị ekwe omume ime ya ka ọ rụọ ọrụ. Na Manjaro m bụ ihe ịtụnanya.
Ihe ọzọ, ọ bụrụ na ị na-amalite, anaghị m akwado Ubuntu (ọ bụ ezie na o kwesịrị ịbụ ihe ọhụrụ distro), ana m atụ aro ịnwale Linux Mint ma ọ bụ Lubuntu kama. Karịsịa LM abatala na ngwa niile etinyere ma dị njikere iji.
N’ebe ahụ ka anyị tụkwasara anya. Ka o sina dị, maka ugbu a (naanị maka ugbu a), abịara m na nsogbu edozila na ụfọdụ flakes nke W7. Na, n'ezie, ihe niile m rụnyere ahazi, jiri ya "zụọ" ihe niile. Ọ bụrụ na enwere m kọmpụta ọzọ (nke ọzọ) maka desktọpụ m, a ga-agba m ume na mberede igwu egwu na ụzọ ndị ọzọ, ma nwaa ha n'enweghị ihe egwu. Mana nke a abụghị ikpe. E nwere nanị otu kọmputa na n'ụlọ, abụ m naanị onye na-abanye na tebụl a. Ya mere, na ihe mberede, enweghi m onye m ga-agakwuru ozugbo, yana ihe mberede n'okwu a, ị maara na ha na-eme mgbe ha ekwesịghị: ngwụsị izu, n'abalị, ụbọchị mmiri ozuzo, wdg.
Akwụ ụgwọ ike na-adịgide adịgide, ike ida na mberede na nke ọzọ, nrụpụ ọrụ USB, yana nsogbu mba ndị ọzọ bụ ihe agbakwunyere.
Windows, n'oge ahụ, dị ka ọ ghọtara nsogbu ndị a ma gbakee, na-eme akwụkwọ nkwado ndabere na enwere ọtụtụ narị ngwaọrụ mgbazigharị na mgbake data maka ọdịda ma ọ bụ mmejọ siri ike, nke ahụ ga-etinyekwa n'ime akpa iji nyochaa nke ọma. N'ezie, Linux ga-enwe otu ma ọ bụ karịa ikekwe. Mana dika Adrián kwuru, "ị ga-amata ya, ịmụ akwụkwọ, wdg." Ọ bụkwa n’ebe ahụ ka ndagwurugwu dị n’etiti evolushọn na-apụta. Enweghị oge maka nke ahụ. Na mberede, ọ bụrụ na enwere m obere oge iji chebe, (mgbe niile n'okwu a), m na-eji ya iji melite ma ọ bụ mụta iji mmemme m nwere, nke n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, ma ọ bụ site na nkuzi YouTube, na akwụkwọ ntanetị, ma ọ bụ akwụkwọ ndị a zụtara na ụlọ ahịa akwụkwọ, otu na-edozi, ebe ọ bụ na nkenke, ihe niile na-agba n'otu ikpo okwu, folda bụ folda, diski ike bụ na, ọ na-adị mfe site na njikwa disk na-enweghị mkpa ngwanrọ, na N'otu ụzọ ahụ, a na-ehichapụ ma ọ bụ kagbuo ngwaọrụ, yana ogologo wdg. Ihe ọzọ sistemụ arụmọrụ, ọ bụchaghị Linux, ihe ọ bụla, chọrọ ịmụ ihe niile ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ bụ kensinammuo, ọ bụghị mgbe niile. N'ezie, maka ndị sitere na Linux, ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ ọ bụla ọzọ dabere na usoro, ihe isi ike dị obere, n'ihi na enwere isi okwu. Windows, site na nsụgharị mbụ ya, nke bụ ọkara DOS na nke ọzọ "ihe ọ bụla" n'oge ahụ. Ọ na-emepe ụdị nke sitere na njirimara onye ọrụ, nke ahụ bụ isi ihe kpatara ewu ewu ya, yana njehie ya dị egwu, ntanye igwe na-acha anụnụ anụnụ, nje, ihe atụghị, anya, wdg. N'oge a, mmadụ ga-ahọrọ dabere na ihe dị ya mkpa n'ezie na ike.
Ana m ekele gị maka ozi ahụ. Aga m etinye ya n’uche.
Ee, ọ bụ eziokwu na ị ga-amụ obere, mana dịka ihe niile, ọ bụ eziokwu?
Onweghị ihe enyerela aka.
Ọ bụrụ na ọ na-ejere gị ozi, ana m ahapụ gị njikọ ndị a na ntuziaka ezubere maka "newbies" na Linux:
I meela nke ukwuu maka ihe ngosi maka nrụnye kachasị mma. Ezigbo ozi kọwara nke ọma.
My Ubuntu 13.10 na-amata Samsung 6000 usoro TV mana TV anaghị amata mgbaàmà HDMI na laptọọpụ. Enweghị foto ma ọ bụ ọdịyo.
Agbalịrị m ịgbanwe eriri ma ọ nweghị ihe mere.
Chọọ ụwa niile ma ọ dị ka ọtụtụ nwere nsogbu na TV TV ndị ọhụụ.
Nwere ike inye m azịza, biko?
Zaghachi Angel Valdecantos
Pablo Ernesto Grisance dijo
Amachaghị m kọmputa, mana enwere m olileanya ịmegharị ngwa ngwa na Linux Ubuntu
Zaghachi Pablo Ernesto Grisancich
N'ime nkeji ọhụrụ a, anyị kọwara etu esi etinye Ubuntu 13.10 Saucy Salamander site na nzọụkwụ ... ee, maka ndị dummies.
3. Hazi BIOS ka buut si CD / DVD ma ọ bụ site na pendrive, dabere na ihe ị họọrọ na aga na nzọụkwụ.
Ahịrịokwu abụọ a anaghị agbanwe agbanwe, enweghị m ike ịnweta W XP, Mbipụta ,lọ, mbipute 2002, Nchịkọta Ọrụ 3, buut si pendrive, ya bụ, ọ naghị enye m nhọrọ ahụ, n'ime »SetUp», »Advanced», »Sequence From Start», enwere nhọrọ 4: »Ngwaọrụ ewepụ», »CD-Rom Drive», Draịvụ ike », Ngwaọrụ Ntanetị», M họrọ «Ngwaọrụ ewepụ», mana ọ ka agaghị ebu.
Zaghachi Daniel F Serrano
Nnọọ! Echere m na ị ga-ahapụ pendrive na mgbe ịmalitere, nri? Ọ bụrụ otu a, mgbe ahụ ọ nwere ike ịbụ na ị wụnye Linux na draịva na-ezighi ezi.
Ana m akwado ka ị lee anya n'isiokwu na-esonụ:
Ndewo Pablo, daalụ maka nlebara anya gị, ọzọ m malitere nwụnye Ubuntu 13.04, ebudatara m na pc m, m budata UntBootin, na mmemme a ezigara m USB, na-ewepụghị ya, bidogharịa pc m, gbanwee boot iji mee ya na USB m, ihe ntanetị wee pụta: «SYSLINUX 4.03 2010-10-22 EDDCopyrtight (C)
1994-2010 H Peter Anvin et al »; na akara ala: _ na-egbu maramara. nke a ewerela awa 1/2
Kedu ihe kpatara o jiri sie ike iji ezigbo ihe ọzọ na Windows XP? Mgbe mbọ atọ na-emezughị, ọ na-anọgide na-amalite ịchekwa ịzụta Windows 7. Ọ bụrụ na ọ bụ naanị maka »nerds» ọ ga-esi ezigbo ike itinye onwe ya dịka ezigbo ọzọ ka Windows.
Ọzọkwa enwere m ekele maka nlebara anya gị,
Ndewo Daniel! Lee anya, “ihe dị mfe” ga-abụ ịnwale distro ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, na Linux Mint, nke a kwadoro maka "newbies." Ma ọ bụghị na ị nwere ike ịnwale Lubuntu.
M hapụrụ gị njikọ nwere ike ịmasị gị: https://blog.desdelinux.net/5-opciones-para-migrar-de-windows-xp-a-linux/
Ndewo Pablo, daalụ ọzọ, ma ọ dị ka pc m na-egbochi ntinye Ubuntu ọ bụla; Ọ ga-amasị m ịmara ma enwere nhọrọ ọ bụla enwere ike ịwụnye na-enweghị Unetbootin? ọ naghị arụ ọrụ m na distro ọ bụla.
Nke a bụ ụzọ ọzọ akọwapụtara: http://www.ubuntu.com/download/desktop/create-a-usb-stick-on-windows
I nwekwara ike iji njikọ a: https://help.ubuntu.com/community/Installation/FromUSBStick
Ndewo Pablo, na-ekele gị nke ukwuu maka njikọ ahụ »mepụta mkpanaka USB na windo, site na ya enwerela m Ubuntu 13.04 ebudatara, n'oge na-adịghị anya, a ga-arụnyere ya karịa WXP lara ezumike nká yana site na m tufuo nke dị ize ndụ ntụgharị Enwere m ajụjụ, Ubuntu, na ogwe kwụ ọtọ n'aka ekpe, na ala, n'okpuru "nhazi usoro" ọ na-egosi m njikọ akpọrọ: olu 60Gb, ebe faịlụ Wxp m niile dị, yabụ m nwere ike iwunye Ubuntu site na iwepu Wxp, na ekwesighi m ndabere faịlụ Wxp m?
.- Ebee ka mchọtara keyboard nke laptọọpụ m na Ubuntu, ọ bụ naanị na-enye maka desktọọpụ desktọọpụ, ekele ọzọ, enwere m ezigbo obi anụrị.
Banyere ajụjụ mbụ gị: mee nkwado ndabere tupu ịme ụdị ihe ahụ! N'agbanyeghi otu ị gha sie ike na ntinye Linux agaghi "kwụpụ" na ozi gị.
M na-atụ aro ka ị gụọ isiokwu a: https://blog.desdelinux.net/distribuciones/ ebe a kọwara ụzọ dị iche iche iji wụnye Linux.
ọ dị mma m na-etinye ubuntu 13.10 ma ọ na-enye m njehie ma kwuo nke a: Enweghị ike iweghachite faịlụ nrụnye achọrọ. ajuju m bu, o bu njehie oge ma obu nsogbu ndeko na cd / dvd, achoro m ka i za m nke oma ma biko
Ndewo Carolina, daalụ Pablo onye zitere m njikọ dị n'okpuru ebe a enwere m ike ịmepụta USB m nke gụrụ windo XP m kwụsịrị, ọ nwekwara ike ijere gị ozi, n'ihi na Unetbootin ọ fọrọ nke nta ka m hapụ Linux.
Ezigbo ndu, o nyeere m aka nke ukwuu maka ndị mbido 😀
debe ya, na-ekerịta ihe ọmụma 🙂
Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Elementary OS 0.2 Luna
[HUMOR] Canonical, Canonipple, Microsoft